I-10 kufuneka-ineewijethi zeZiko leSaziso le-iOS 8 | IPhone iindaba
UCarmen rodriguez | | IPhone iindaba, Iapps zokusebenza, iOS 8
Ukuvula inkqubo ye-iOS 8 kuvumela ukungena kumdlalo wabaphuhlisi abaninzi abajolise ekudibaniseni iiapps zabo kunye neSiri, iTouch ID, iSafari, njl. Nangona kubonakala ngathi kungumbuzo olunge ngakumbi kunonjiniyela kunangomsebenzisi, ayisiyiyo, luluncedo ekusebenzeni, Ngoku amava okusebenzisa le nkqubo ulwelo ngakumbi kwaye ngentando.
Ngaphakathi kokukhulelwa okutsha kukho uthotho lwezicelo ezibonakala kuthi kubalulekile kwaye bajolise kuzo lungiselela iZiko leSaziso.
1 Imozulu yeWidget
3 Uqikelelo +
4 IiWidgets Pro
5 Iwijethi yeXesha leHlabathi
6 Iwijethi oyithandayo
8 IMonitor ye-iOS 8
9 IZiko leMidlalo le-ESPN
Iwijethi yemozulu ikuvumela ukuba ujonge imozulu kwindawo oyikhethileyo ngokukhangela. Iqulathe ulwazi lwe ukufuma, uxinzelelo, imvula, ukubonakala, indawo yombethe, i-UV, ulwazi oluneenkcukacha ngeemeko zomoya kunye nokubanda komoya. Ibe uqikelelo lweenkcukacha lweeyure ezili-12 ezizayo noqikelelo olulandelayo Iintsuku ze5.
Ukubonelela ngendlela enobuchule yokuthumela kuyo I-Facebook okanye i-Twitter kwiziko lakho lezaziso. Ungathumela inqanaba lakho, ulayishe imifanekiso okanye wabelane ngendawo yakho kuFacebook kwaye, kunjalo, nge-tweet.
Njengoko unokucinga, le yenye iwijethi yemozulu, ibonelela ngeendlela ezimbalwa kunangaphambili kodwa ibonakalisa ukhetho indawo yokudlala enomdla kakhulu.
Este zonke zibe munye ixhasa inani elikhulu lamawijethi kwezicelo zakho ozithandayo, kubandakanya iTwitter, kunye nokubonelela ngokufikelela ngokukhawuleza kwiinkonzo zikawonkewonke ezinje ngesibali, ikhampasi, kunye nezinye ezininzi. Ezizisa ngokungagqibekanga zezi:
Ukondla iWidget yakho yobuqu
Iwijethi yoLwazi lwemozulu kwihlabathi liphela
Ixesha langempela lokuKhangela ukuHamba kweNdiza
Iwijethi yeWatch World
Iividiyo ezivela kwi-YouTube Widget
Iwijethi yezilumkiso zemozulu
Widget yeNkanyamba Tracker
Iwijethi yeXesha leHlabathi
Iwijethi yeWorld ClockMahala
Le widget izisa iwotshi yehlabathi kwiZiko leSaziso, liyenza ngakumbi ngokukhawuleza kwaye kulula ukubona ixesha kunye nomhla ichanekile naphina emhlabeni, isebenza nkqu isikrini esivaliweyo. Ilungele abahambi, ishishini lamanye amazwe okanye ngokulula ukunxibelelana nabahlobo kunye nosapho oluhlala kwamanye amazwe.
Iintandokazi Widget ProMahala
Tsalela umnxeba abafowunelwa abathandayo ngokuthe ngqo kwiZiko leSaziso, ungacwangcisa abafowunelwa babe ngamaqela kwaye ufikelele kuzo ngokuthe ngqo kwiZiko leSaziso.
IiWdgts siseti seewijethi eziluncedo kakhulu, le nguqulo iquka: sokubala, isiguquli semali, izowuni yexesha, ikhalenda kunye nesakhelo sefoto. Inokuthenga ngaphakathi nohlelo.
IMonitor ye-iOS 8
iMonitor-Gcina iNethiwekhi kunye nokuSebenzisaMahala
iMonitor ibonelela ulwazi lwenkqubo, ibonisa ukusetyenziswa kwememori, ukugcinwa kunye nokusetyenziswa kweCPU ngexesha lokwenyani.
IZiko leMidlalo le-ESPN
I-ESPN: Imidlalo ebukhomaMahala
Inguqulelo ehlaziyiweyo yesicelo esithandwayo seScoreCenter. Le app intsha abalandeli bezemidlalo, ifika ngeSpanish kwaye igcwele iziphumo ezikhoyo, iindaba ezitshisayo, iividiyo, uhlalutyo olunzulu, izilumkiso ezizezakho, nokunye okuninzi.
Y ukuza kuthi ga ngoku ukhetho lwethu, ukuba unayo nayiphi na iwijethi oyithandayo ocinga ukuba ikuluhlu, Nika izimvo kwaye wabelane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 8 » I-10 kufuneka-ineewijethi zeZiko leSaziso le-iOS 8
Andazi ukuba kutheni iapile ibize ezi widgets, ngelixa zizaziso ezinxibelelanayo. Amawijethi abo bonke ubomi, abekwe kwiiphedi zentwasahlobo, kunye nezinye izicelo. Ndisacinga ukuba eneneni sinee-widgests kuphela kwi-iphone enkosi kwi-cydia ... nokuba bazama kangakanani ukutshintsha igama lezinto. Ngale ndlela babulala iintaka ezimbini ngelitye elinye, kufana nesigqubuthelo somlomo, ukuze ukhuphiswano lungatsho ukuba ii-iPhones azinazo iwijethi, kanti azinjalo.
Ndisayikhumbula into yam yesiqhelo ye-iPhone 5 enkosi ngenxa yokuqhekeka kwejele, yayiziwijethi ... i-iOS 8 inendlela ende yokuya kwinqanaba lokuzenzela kunye nokuzikhethela okunikezelwa ngabantu besithathu kwi-cydia. Umkhethe wabo uyabakhathaza kwaye ndiyoyika ukuba soze batshintshe.
Sinee-wifget zemozulu kwaye akukho zixhobo ze-native ... ezimangalisayo.
U-Apple ushiye isiqingatha ngasinye sezinto ezithi zibhengeze i-boom boom kwisibhengezo sokugqibela
Wonke umntu unoluvo lwakhe kwaye yile nto eyenza ukuba umhlaba usebenze, ukuba sonke besicinga ngokufanayo, kuya kuba mnandi kakhulu!
Ke ngokoluvo lwam ndicinga ukuba iApple ibeke iwijethi kwiziko lezaziso ukuze ingagqithisi ngaphezulu isikrini. Ndiyayithanda ngcono ke ii icon ezixutywe neewijethi. Mhlawumbi yile nto eyenza i-iOS yahluke kwaye ngokoluvo lwam ibhetele ngakumbi kune-android 🙂
Yonke into sisiphumo se-OS X, okanye awukhumbuli ukuba ziphi iiwijethi (izixhobo kwiWin) ze-OS X? Ndizithanda kakhulu kwiscreen esahlukileyo, nangona ndingazisebenzisi, kokukhona ukusetyenziswa kwedatha kunale nto bandincedayo yona
Masibone danfg95. Ndizokwenza ukulungiswa kancinci kuwe. Inkampani nganye yenza oko ikholelwa ngcono kwi-OS yayo kodwa oku akuthethi ukuba kufuneka siginye i-100% yezinto. Ngamnye uya kuba nezinto abazithandayo, ewe, ndingumsebenzisi we-Android kunye ne-iOS kwaye ndiyazithanda izinto ezahlukeneyo. Kodwa ngenxa yokuba ndingumsebenzisi wenye okanye enye, andizukugxeka into echaseneyo ethi eyam yeyona ilungileyo kuyo yonke into, kwaye nokuba kuncinci ukuba awuzazi kakuhle iindlela zokhuphiswano. Ngaba uyazi ukuba kwi-Android ungasebenzisa izikrini ezahlukeneyo zeNtloko ngaphandle kokubeka iwijethi enye? Ngaphezu koko, unokubeka umxholo okanye iROM epheleleyo ukuze ujongano lonke lujongwe ngokupheleleyo yi-iOS, kubandakanya ii icon, iDock, njl. Kulapho, ukuba ndiyaqonda ukuba i-Android iphumelele ngokubonelela ngeendlela ezininzi, ekuzenzeni ngokobuqu iphumelela kakhulu. Kwezinye izinto ezininzi ndikhetha i-iOS kodwa hayi kuleyo isemva kakhulu. I-iOS ikukukhawulela kakhulu, ihlala ihleli, nangona kwezinye izinto iphakamile, asinakunyaniseka nje ukuthethelela ukhetho lwethu. Konke okugqibelele.
Phendula ku Rafa78
Iminyaka emithathu ngaphandle kukaSteve Jobs